လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုများနဲ့ မလွဲမသွေဖြတ်သန်းရမယ့် ကာလတစ်ခု – Gunners' Side
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ အရည်အသွေးမြင့်လူငယ်လေး ဘရိုဂျာကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ အီဒူးဟာ နောက်ထပ်အချိန်ကုန်မယ့်ကိစ္စတစ်ခုကို ထပ်လုပ်နေပြီဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဟိုကစားသမားခေါ်မယ် ၊ ဒီကစားသမားကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟာလတွေအများကြီးထွက်လာပြန်ပါတယ်။ စပိန်သတင်းစာ Fichajes က ဆိုရင် အေစီမီလန်ကစားသမားလီယာအိုကို စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးအထိဖော်ပြလာပြန်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ သိပ်ပြီးခေါင်းစဥ်တပ်လို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နေပြီလား။ အီဆက် ၊ ဒေးဗစ် ၊ ကဲဗက်လီဝင် .. အခုနောက်ဆုံးအသစ်ဆက်ဆက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ ဘရိုဂျာ။ Express ကလည်း တိုင်လာအဒမ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် လွန်ခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းကပဲ တက်ထားပြန်တယ်။ အီဒူးရဲ့ စားပွဲပေါ်က စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ ပျက်ရယ်ပြုစရာဖြစ်နေခဲ့ပြီလား။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကလည်း မယ်လိုနဲ့ပတ်သတ်တဲ့သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Board အဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီမှုမရှိတာကြောင့် ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အာတီတာနဲ့ သူ့နဲ့အပေါ် ပိုင်ရှင်တွေထားရှိတဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိနေမလဲ။ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရာရရဲ့လား။
လီယာအိုအကြောင်းပြန်ကောက်ရအောင်။ လိုင်လီမှာလည်း ကစားဖူးတဲ့လက်ရှိစီးရီအေတောင်ပံလူဟာ အေစီအတွက် ပွဲ ၁၀၀ ကစားပေးထားပြီး ၂၃ ဂိုးထိသွင်းယူပေးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်လိုအပ်နေတဲ့သူလဲ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်စိတ်ဝင်စားတာလား၊ သတင်းဖန်တီးတာလားဆိုရင်တော့ ဒုတိယအချက်ကိုပဲ ပြောရမယ်ထင်တာပဲ။
အားလုံးရဲ့ရင်းမြစ်ကတော့ အီဒူးအပါအဝင် အာတီတာ နဲ့ ဂျို့ရှ်ခရွန်ကီတို့ရဲ့ စားပွဲပေါ်က လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနုနယ်နေခြင်း နဲ့ ဥရောပဘောလုံးအတွေ့အကြုံအားနဲနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ စီးပွားရေး ဆရာကြီးတွေကျင်လည်နေတဲ့ ခေတ်ပေါ်အားကစားစီးပွားရေးလောကမှာ သူတို့တွေ အရူးလုပ်ခံရတဲ့အချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုခြင်းမှာ အားအင်တွေရှိနေသလို ၊ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် မနူးမနပ်ဆိုတဲ့စာရင်းသွင်းခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။
အာတီတာမှာလည်း ပြသနာရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဝုဗ်ကို ၂-၀ နဲ့ရှုံးတာ သူဆိုရင် Arteta Out ဆိုတဲ့ အသံတွေဆူညံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်လဲ ရှုံးပွဲတစ်ပွဲပွဲကြုံတဲ့အခါ မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။​ ကြုံလဲကြုံမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နည်းပြ Profile မခိုင်မာခြင်းဟာ သူ့အပေါ်မှာ သံသယတွေအလွန်များစေပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခံရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Career ကို အသင်းလတ်တစ်သင်းကနေ Build Up မလုပ်ပဲ အာဆင်နယ်လို Global Icon ဖြစ်တဲ့အသင်းကိုတန်းရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့မဆန်းပါဘူး။ အီဒူးဖက်ပြန်သွားရအောင်။
အာတီတာအပေါ်အသင်းဖက်ကယုံကြည်မှုကတော့ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အီဒူးအပေါ်မှာရော ? ကရွန်ကီတွေဖက်က အာတီတာကို ထောက်ခံထားသလို အီဒူးကိုရော ထောက်ခံထားပါသလား? အသင်းကို လှောင်စရာကောင်းအောင် ၊ ရယ်စရာကောင်းနေအောင် လုပ်နေတာ အီဒူးရဲ့ Business Skill ကြောင့်လား? စာရေးသူကတော့ ဒီအချက်တစ်ခုထဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ဂျို့ရှ်ခရွန်ကီကိုယ်တိုင်က အသက် ၄၁ နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုလဲမေ့လို့မရပါဘူး။ ဒီအသက်အရွယ်တွေဆိုတာ ဦးဆောင်သူအဆင့်တွေထဲမှာ လူငယ်တွေလို့ပြောနိုင်တဲ့အသက်အရွယ်တွေပါပဲ။
အခြေအနေအားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ရရင်တော့ အာဆင်နယ်အသင်းကို ဘောလုံးလောကမှာ Seniority အရ Bully လုပ်ချင်ကြတာကလဲတစ်ကြောင်းပါမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ အီကာဒီကို ခေါ်မလားဆိုပြီး ပီအက်စ်ဂျီဖက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကလဲ သက်သေတစ်ခုပဲလို့ယူဆပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်လုပ် လွယ်တယ်လို့ ယူဆနေပုံပါပဲ။ ဖွဖို့အတွက် ကြားခံကောင်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့တောင်ဆိုရပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက်ကို စျေးကွက်တင်ခြင်ရင် အာဆင်နယ်နဲ့သာ Rumor ထုတ်လိုက် ၊ ရက်ပိုင်းအတွင်း လူသိများသွားတယ်ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ထူးခြားတဲ့ စားပွဲဝိုင်း စွမ်းဆောင်ရည် ၊ဆုဖလားမှတ်တမ်း စတာတွေနဲ့ ချေဖျက်မှသာလျှင် ဒီလူငယ်အုပ်ချုပ်သူ အစုအဖွဲ့ဟာ မခေပါလားဆိုတဲ့ ပုံရိပ်ကိုဘောလုံးလောကမှာတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီကြားကာလမှာကတော့ စျေးကြီးနဲ့ တင်ရောင်းတာ ၊ မလိုချင်လို့ထိုးရောင်းတာ ၊ အောက်စျေးနှိုက်တာ စသည်ဖြင့် ဘောလုံးလောကထဲက ဝါရင့်ကြီးတွေပညာပေးတာကို သူတို့တွေလှိမ့်ပြီးခံရဦးမှာပါပဲ။